Mogadishu Journal » 2021 » September » 8
Cristiano Ronaldo oo ku soo laabanaya Manchester United ayaa ka caawin doona kooxda Ole Gunnar Solskjaer inay u tartanto hanashada horyaalka, sida uu qabo Red Devil Wayne Rooney. Rooney ayaa la ciyaaray Ronaldo intii uu joogay Old Trafford shan sano, isagoo kula guuleystay saddex...
Former president says he left Kabul in order to avoid the risk of bloody street fighting, reiterates denial of stealing millions. 8 Sep 2021 Afghanistan’s former President Ashraf Ghani has said it was never his intent to “abandon the people” as he apologised to Afghans for the...
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in aysan dhaqan gal ahayn xil ka qaadis kasta oo lagu sameeyo xubin ka tirsan Golaha Wasiirada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ilaa ay ku timaaddo si waafaqsan Dastuurka KMG ah ee...
Jadwalka doorashada xubnaha Aqalka sare ee Hirshabelle oo la soo saaray (Akhriso)
Guddiga doorashada Baarlamanka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa soo saaray caawa jadwalka doorashada xubnaha aqalka sare ku meteli doona maamulkaas afarta sano ee soo socota. Talaabadan ayaa ku soo aadeysa xili maanta Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe uu...
DEG DEG: Rooble oo xilka ka qaaday Wasiirkii amniga, Mid cusubna Magacaabay
Ra’iisul Wasaaraha Somalia ayaa caawa xilkii ka qaaday Wasiirka amniga Xasan Xundubey, isagoo magacaabay mid cusub. Qoraal ka soo baxay xafiiska Rooble ayaa lagu sheegay in wasiirka cusub ee amniga loo magacaabay C/llaahi Maxamed Nuur. “Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxmaed...
Muuse Biixi oo qaabilay Mss. Kristina Svensson iyo xubno ay horkaceysay (Sawirro)
Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi ayaa qaabiley madaxa Bangiga Adduunka u qaabilsan Somalia Kristina Svensson oo ay wehelinayso Marwo Kaltuun Xasan oo ka mid ah masuuliyiinta sar-sare ee Bangiga Adduunka. Muuse Biixi ayaa uga xog-waramay qadiyada madax-bannaanida...
Maxkamada ciidamada oo qabatay dacwad ka dhan ah Fahad Yaasiin & Xubno kale (Akhriso)
Qoyska ay ka dhalatay Ikraan Tahliil Faarax ayaa dacwad ka dhan ah hogaanka sare ee NISA u gudbiyey xeer ilaalinta Maxkamada ciidamada qalabka sida ee Somalia. Qoraalka dacwada oo nuqul ka mid ah loo soo diray Allbanaadir Online waxaa lagu xusay magacyada afar eedeysane oo loo...
Madaxweynaha Hirshabelle oo soo saaray Liiska Musharaxiinta Aqalka Sare (Akhriso Magacyada)
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Ali Gudlawe Hussein ayaa goordhaw soo saaray Liiska Musharixiinta ku tartamaya 8 kursi oo Dowladdda Hirshabeelle ku leedahay Aqalka Sare. Madaxweynaha Hirshabelle liiskan uu soo saaray ayaa ah kuwa ugu badan ee u...
Madaxweynaha Dowlad goboleedka Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo safaro shaqo dalka dibadiisa ugu maqnaa ayaa maanta dalka dib ugusoo laabtay, waxaana si weyn loogu soo dhoweeyay magaalada Gaalkacyo. Soo dhoweynta Madaxweynaha waxaa ka qeybagalay...